Akakiya Aluminum Lugs Manufacturers uye Suppliers | China akakiya Aluminum Lugs Factory
Jera mutsetse zvakakodzera co., Ltd ndiye mugadziri pamusoro CLB waya lugs simba netambo uye panhongonya nemitsetse.
Jera vakadzidza guru-siyana pasi, svikiro uye yakakwirira voltage wire majoini, uye pamagungano siyana uye nzira basa. Tava chinozoiswa kupfuura rakakodzera waya jointing nenhumbi nechinangwa kugumiswa uye maererano nokuda hutachiwana mitsetse. Nzvimbo kushandiswa: hazvo, maindasitiri kuvakwa, pevhu, njanji mitsetse, nemagetsi terminations mabhokisi uye makabhati, pevhu waya kuvharwa.
Tinobudisa fura musoro wire lugs kubva simba yakakwirira, ngura nemishonga aruminiyamu zvinhu, pamwe gaba yakanamirwa pamifananidzo. Double torque munyika dzine pamusoro aruminiyamu nemipande hunovimbisa nechivimbo zvemagetsi kubatana kuti zvakasiyana diameters ose netambo, uye kusavapo kutsoropodza nemishonga.
Welcome kutaura tive zvakawanda, tinoda kupa iwe chigadzirwa kupfuura kunyorwa-siyana zvokuimba aruminiyamu waya lugs.
Sheari musoro bhaudhi lug CLB 150-240
Sheari musoro bhaudhi lug CLB 70-120
Sheari musoro bhaudhi lug CLBV 150-240
Sheari musoro bhaudhi lug CLB 4-35